Blog – SUNNY Tech News
လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်အတွင်းမှာ အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တွေနဲ့ တန်ဖိုးသင့်ဖုန်းတွေ ပေါများလာတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှုဟာ ၁၃% ကနေ ၁၂၄% ထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ကိုမျက်ခြေမပြတ်လိုက်နိုင်လာပြီး နိုင်ငံတကာမှာသုံးစွဲနေတဲ့ network services တစ်ချို့ကိုလည်း လက်လှမ်းမှီလာကြပါပြီ။ အခုဆိုရင် မြန်နှုန်းမြင့် 4G network နဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာပါ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တွေရှိလာတဲ့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တွက်ကြည့်ရင် အင်တာနက်ရရှိလာတဲ့ဒေသတွေများလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၂၀ တစ်နှစ်လုံးမှာ ခေတ်စားသွားခဲ့တဲ့ နည်းပညာ trend တွေကတော့ Digital marketing မြန်မာနိုင်ငံမှာ Social media အသုံးပြုသူအရေအတွက်ဟာ ၂၂သန်းရှိနေပြီဆိုတော့ လူဦးရေရဲ့တစ်ဝက်နီးပါး ရှိနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို Digital Marketing ခေတ်ကို ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်အောင် တွန်းပို့လိုက်သလိုပါပဲ။ Social media Advertising agencyContinue reading “၂၀၂၀တစ်နှစ်လုံးမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နည်းပညာရေစီးကြောင်း(၅)မျိုး”
by Thet Su Lwin	 28th Dec 2020 28th Dec 2020
ဆောင်းရာသီရဲ့အအေးပိုကဲတဲ့ဒီဇင်ဘာလကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ မကြာခင်မှာနှစ်‌ဟောင်းကုန်ပြီး နှစ်သစ်ကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ အရင်နှစ်တွေကလိုမျိုး New Year Plan တွေလုပ်ဖို့အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား? နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်မှာ အိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့နေပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်လို့ရမယ့် activities လေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေး chill လို့ရမယ့် idea တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) နယ်မြေရပ်ခြားအဝေးကိုရောက်နေတဲ့ ချစ်ရသူတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ Group Video call ပြောလို့ရပါတယ်။ နှစ်သစ်မကူးခင်မှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ချင်းစီဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်ဖြစ် အတူတူ Count Down လုပ်ကြရင်း နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ပျော်စရာညတစ်ညကို ကုန်ဆုံးလို့ရပါတယ်။ (၂) အိမ်မှာပဲ အရင်းနှီးဆုံးဘော်ဒါတွေနဲ့ New Year Dinner ကိုသေချာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီး သီချင်းတွေအပီအပြင်ဖွင့်ရင်း သောက်ကြစားကြနဲ့ နှစ်သစ်ကူးညမှာ House partyContinue reading “နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်တွေကို အိမ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ?”
by Thet Su Lwin	 22nd Dec 2020
စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ၂၀၂၀ ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ Ready ပဲလား? ဒီနှစ်ကတော့ New Year Celebration ကို အိမ်မှာပဲပျော်ပျော်ပါးပါးဆင်နွှဲရမှာဆိုတော့ စိတ်တိုင်းကျကဲဖို့ လိုအပ်မယ့်ရိက္ခာတွေတော့ စုဆောင်းပြီးလောက်ရောပေါ့နော်။ ပိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင် ခုချိန်မှာဝယ်ရင် ထက်ဝက်စျေးနဲ့ရမယ့် electronic ပစ္စည်း (၄) မျိုးအကြောင်း သတင်းကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်။ (1) Alpha Bluetooth Speaker New year မှာ အရင်လို Live Show တွေမသွားရလို့ စိတမကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့။ Alpha Bluetooth Speaker က Live concert ထဲရောက်နေသလိုမျိုး sound effect အပြည့်အဝပေးနိုင်လို့ သီချင်းကိုအားရပါးရဖွင့်ပြီး ကခုန်နေလို့ရပါတယ်။ True Wireless Stereo စနစ်ပါဝင်ပြီး Bass သံအစစ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်ထဲမှာတင် Home partyContinue reading “2021 New Year ကို အိမ်မှာပျော်ပျော်ကြီးနွှဲဖို့ အတန်တကာ့အတန်ဆုံးစျေးနဲ့ရတုန်း ဝယ်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်း(၄)မျိုး”
by Thet Su Lwin	 16th Dec 2020 18th Dec 2020
၂၀ရာစုနောက်ပိုင်းမှာ Electronic ပစ္စည်းတွေကို သေးသထက်သေးပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်တဲ့ပုံစံတွေအဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လာကြပါပြီ။ Tech gadgets တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ လောလောဆယ် smartphone တစ်မျိုးပဲအသုံးပြုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကို ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် Portable Gadgets (၅) မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ (1) Samsung Galaxy UV Sterilizer နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ နာရီ၊ ဖုန်း၊ နားကြပ်၊ မျက်မှန် စတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာ ရောဂါပိုးမွှားတွေ ကပ်ကျန်မနေအောင် ပိုးသတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အခုလို Covid ကာလမှာ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အချိန်တိုအတွင်း bacteria တွေကို ၉၉.၉၉% သတ်ပေးနိုင်တဲ့ sterilizer တစ်လုံးကတော့ အလိုအပ်ဆုံး gadget တစ်ခုပါပဲ။ Samsung Galaxy UV Sterilizer က ၈လက်မအရွယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအထိContinue reading “သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးဝင်တဲ့ Gadget (၅)မျိုး”
by Thet Su Lwin	 14th Dec 2020 15th Dec 2020
အလုပ်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြီးအောင် လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ ဟိုပစ္စည်းထယူရ၊ ဒီပစ္စည်းထယူရနဲ့ နှောင့်နှေးနေတာမျိုးတွေရှိလား? ထိုင်ရာကနေထစရာမလိုပဲ အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးမယ့် Electronic Accessories တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ (1). Digital Display 4USB Charger လုပ်ငန်းသုံးဖုန်း ၊ အိမ်သုံးဖုန်း နဲ့Tablet တွေကို တစ်ချိန်ထဲမှာ အားသွင်းထားလိုက်ရင် အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခါ အဆင်သင့်သုံးရုံပါပဲ။ Devices (၄) ခုကို တစ်ချိန်ထဲမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းနိုင်တဲ့ USB Charger ရှိထားရင် ပလပ်ပေါက်မလောက်တဲ့ပြဿနာ မကြုံရတော့ဘူးပေါ့။ ထမပေါက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Explosion-proof charger ဖြစ်ပြီး Digital display ပါဝင်တာမျိုးကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ Buy Baseus Digital Charger with best deals here. (2).4inContinue reading “Must-have Electronic Accessories for Maximum Productivity | အလုပ်စားပွဲပေါ်မှာ ရှိထားသင့်တဲ့ ခေတ်မီ Accessories ၅မျိုး”
by DaxDo	 20th Nov 2020 22nd Nov 2020
အခုဆိုရင် 2021 ကိုရောက်ဖို့ကလည်း လပိုင်းပဲလိုပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် 2020 မှာထွက်ခဲ့တဲ့နည်းပညာပစ္စည်းတွေကတော့ အကုန်မဟုတ်သေးပါဘူး။ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်အနေနဲ့ ဆက်ပြီးရင်ခုန်ရမယ့်၊ နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် အမိုက်စား နည်းပညာပစ္စည်း (5) မျိုး ကျန်နေပါသေးတယ်။ (1). Xiaomi Mi Smart Speaker Xiaomi ကအသစ်ထွက်လာမယ့် ဒီ Smart Speaker က Europe မှာတော့ မိတ်ဆက်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ Google Assistance နဲ့ 12W power ပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Design နဲ့ Speaker မှာ အသံထွက်တဲ့ ဘဲဥပုံစံအပေါက်ငယ်လေးတွေ စုစုပေါင်း 10531ပေါက်ပါဝင်ပြီး Stereo 2.0 audio output နဲ့ဆိုတော့ သုံးလို့အတော်အဆင်ပြေမယ့်ပုံပါပဲ။ Google Assistance ပါတဲ့Continue reading “2020 မကုန်ခင်ထွက်မယ့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ နည်းပညာပစ္စည်းအသစ်တွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?”
by DaxDo	 17th Nov 2020 22nd Nov 2020
ဈေနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သုံးချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖုန်းမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်လဲ? Facebook သုံးဖို့၊ Game ဆော့ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပြီး ဓာတ်ပုံရုပ်ထွက်လည်းအတော်အသင့်ကောင်းတဲ့ ဘတ်ဂျက်ဖုန်းတွေကို အခုနောက်ပိုင်း ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များလာကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေသူတွေအတွက် (2) သိန်းအောက် ရရှိနိုင်မယ့် Mid-range Phone (5) လုံး အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ (1). Samsung A11 (6.4-inch screen ) ၂သိန်းမကျော်ပေမယ့် Snapdragon 450 Processor ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး screen size6လက်မ ကျော်အောင်ထုတ်လုပ်ထားတာကတော့ တကယ်မိုက်ပါတယ်။ ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ Punch-hole selfie camera အပြင် Back Camera (3) လုံးမှာလဲ ultra wide camera ပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ USB Type-CContinue reading “Top5Best value-for-money Smart Phones you can choose under 2Lakh MMK”
by DaxDo	 13th Nov 2020 22nd Nov 2020
Gaming Laptop တွေက Gaming Desktop တွေနဲ့တန်းတူ powerful performance တွေ ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ပိုပြီးဈေးသက်သာတာ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတာ စတဲ့အချက်တွေကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ Laptop တွေက ပိုပြီးနေရာရလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် 2020 ရဲ့အကောင်းဆုံး Gaming Laptop တွေထဲကမှ လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ Gaming Laptop (၅) လုံး အကြောင်းကို ရွေးချယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ 1. Asus ROG Zephyrus G14 AMD Ryzen 4000 processors နဲ့ Nvidia RTX 2060 Graphic Card ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ laptop တစ်လုံးလုံး မှ ၃.၅ပေါင်ပဲလေးတယ်ဆိုတော့ တကယ့်ကို ပါးပါးလေးနဲ့ သယ်ရလွယ်ကူစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကContinue reading “စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အမိုက်စား ‘GAMING LAPTOP’ များ”
by DaxDo	 10th Nov 2020 22nd Nov 2020
ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Laptop တစ်လုံး၀ယ်ဖို့အတွက် ရွေးရခက်နေပြီလား? အခုနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေမှာ ဘယ်အလုပ်မဆို Laptop တစ်လုံးတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာကြပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စအတွက် Laptop ၀ယ်ဖို့စဥ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့် Laptop မျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာ ရွေးရခက်နေရင်တော့ ဈေးနှုန်း “ (10) သိန်းအောက်” မှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းသုံး Laptop (5) လုံး အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ 1. Acer Swift3မျက်နှာပြင် 14-inch screen ရှိပြီး ထူးကဲတဲ့hardware တစ်ချို့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် Business Laptop ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ core i5, 8GB RAM အပြင် 512GB of SSD တို့ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာContinue reading “ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Laptop တစ်လုံး၀ယ်ဖို့အတွက် ရွေးရခက်နေပြီလား?”
by DaxDo	 6th Nov 2020 22nd Nov 2020
အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူပဲ ဒီတစ်ခေါက်သီတင်းကျွတ်မှာ လူကြီးမိဘတွေကို ဘယ်လိုပစ္စည်း အသစ် အဆန်းလေးတွေနဲ့ ကန်တော့ရမလဲ? မုန့်ပုံးတွေ၊ Ovaltine ပုလင်းတွေကနှစ်တိုင်းလိုလိုကန်တော့နေကျဆိုတော့ ဒီနှစ်မှာ အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်သွားအောင် လူကြီးမိဘတွေအတွက်လည်း တကယ်အသုံး၀င်မယ့် နည်းပညာပစ္စည်းတွေကို ကန်တော့လိုက်ကြရအောင်။ 1. Lock & Lock Eco Fryer Eco Fryer ကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်ပြီး အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆီမပါပဲ ချက်ပြုတ်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပြီး ဟင်းချက်တာအပြင် အသားငါး နဲ့ အသီးအရွက်တွေ ပြုတ်တာ၊ ပေါင်မုန့်ကင်တာ၊ အေးခဲနေတဲ့အသားငါးတွေကို အပူပေးတာစတဲ့ function တွေကိုလည်း ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလုပ်စရာမလိုပဲ ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ချက်ပြုတ်ချိန်ကလည်း မိနစ်(၃၀)လောက်ပဲကြာတာဖြစ်ပြီး မီးခိုးငွေ့လည်း မထွက်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Eco Fryer နဲ့ချက်တဲ့ အစားအစာတွေက ပိုပြီးနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ အရသာရှိတယ်ဆိုတော့Continue reading “သီတင်းကျွတ်မှာ လူကြီးမိဘတွေကိုကန်တော့ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းပညာပစ္စည်းများ…”
by DaxDo	 2nd Nov 2020 22nd Nov 2020